Sida aad ugu dari karto qof sare oo deegaanka ah liiskaaga wax iibsiga ee sanadkan - Cunnooyinka ku socda Wheels
Sida aad ugu dari karto waayeel maxalli ah liiska wax iibsigaaga sannadkan
Miyaad ogtahay in markaad banaanka joogto oo aad wax ka iibsanaysid fasaxaaga fasaxa ah, inaad hadiyad u soo qaadan karto qof waayeel ah oo deegaanka u baahan. Nidaamka helitaanka hadiyaddaas waayeelka maxalliguna ma sahlanaan karo mahadsanid Hadiyadaha Waayeelka.
Hadiyadaha Waayeelka waa hay'ad samafal maxalli ah oo ku midowday Cunnooyinka Wheels mar labaad sannadkan si ay u siiyaan hadiyado fasax ah waayeelka go'doonsan. Sida Cuntooyinka Lugaha la dhigaa waxay caawiyaan keenista nafaqada iyo isdhexgalka bulshada ee dadka qaata, Hadiyadaha ujeedada waayeelka waa in la hubiyo in waayeelka maxalliga ah ay la wadaagaan farxadda xilliga fasaxa.
Hadday tahay microwave cusub, sharaabaadyo jilicsan ama buste xilliga qaboobaha, hadiyad yar ayaa meel dheer u mari karta qof laga yaabo inuu dhibaato kala kulmo ka bixitaanka guriga oo uusan reer ku lahayn aagga. Sababtoo ah mutadawiciinta Cunnada ee Wheels ayaa horayba u sii waday inay cunno u fidiyaan dad badan oo xaaladdan ku jira, Hadiyadaha Waayeelka waxay iskaashi la sameeyeen in badan oo ka mid ah goobaheenna gaarsiinta si looga caawiyo hadiyadaha fikirka leh inay helaan guryo wanaagsan.
Sida aad u caawin karto
Hadiyadaha waayeelka waxay u sahlaysaa iibinta hadiyadaha dadka qaata. Marka hore, fiiri liistada ay rabaan waxyaabaha hadiyadaha ah ee ugu badan. Kadib, hoos u dhig alaabada aad iibsaneyso foosto hadiyad ah oo kuugu dhow. Hadiyadaha waayeelka ayaa daryeeli doona inta hartay.
Ma doorbideysaa wax ka iibsiga khadka tooska ah? Adiguna taas waad samayn kartaa! Hadiyadaha waayeelka waxay bixiyaan buugga internetka qaar ka mid ah alaabteeda aadka loo codsaday ee aad ka iibsan karto raaxada gurigaaga.
Waxaan u mahadcelineynaa ururrada sida Hadiyadaha Waayeelka, iyo sidoo kale mutadawiciinteenna joogtada ah, ee gacan ka geysta yareynta go'doominta bulshada ee waayeelka maxalliga ah. Booqasho Hadiyadaha Waayeelka wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan barnaamijkooda. Haddii aad jeceshahay inaad kaqeybqaadato qaybtaada si loo yareeyo go'doonka bulshada si joogto ah, booqo annaga bogga tabaruca.
Diisambar 10, 2014